एमालेका असन्तुष्ट जनजाति नेता छलफलमा सहभागी
भदौ १६, काठमाडौं । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको अडानबाट पार्टी पछि हटेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका एमाले जनजाति नेताहरूले शनिवार पार्टी स्थायी कमिटीसँग पहिलोपटक औपचारिक वार्ता गरेका छन् । पार्टीले पटक–पटक बोलाएको वार्तालाई बेवास्ता गर्दै आएका ती नेताहरूले पार्टीमा बस्ने वा नबस्ने भत्रेमा निर्णायक...
सहमतिका लागि दलहरूको नियमित बैठक
भदौ १६, काठमाडौं । राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालका शीर्ष नेताहरू दिनहुँ बैठकमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । केही दिनअघि बसेको तीन दलको बैठकले सहमतिको खाका तयार पार्ने जिम्मा तीन दलका नेतालाई दिएपछि ती दलका शीर्ष नेताहरू सहमतिको बिन्दु खोज्न लागिपरेका हुन् । भदौभित्रै सहमतिको...
प्रमुख दलहरू बजेटमा केन्द्रित : पोखरेल
भदौ १६, कास्की (अस) । नेकपा एमालेका सचिव शङ्कर पोखरेलले मुख्य दलहरू राजनीतिक निकास दिनभन्दा बजेट ल्याउनतर्फ केन्द्रित भएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीको १३औं जिल्ला परिषद्को शनिवार पोखरामा उद्घाटन गर्दै सचिव पोखरेलले एक तृतीयांश बजेट सकिन लागेकाले दलहरू बजेटमा केन्द्रित भएको बत...
नेपालमा सङ्घीयताको पक्षमा भारतीय राजदूत
भदौ १६, विराटनगर । नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले नेपालको समृद्धि एवम् समानुपातिक विकासका लागि सङ्घीयता आवश्यक रहेको बताएका छन् । बीपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठाद्वारा शनिवार विराटनगरमा आयोजित नेपाल र भारतका सीमाक्षेत्रका पत्रकारहरूसँगको बैठकमा उनले सङ्घीतालाई गलत रूपमा लिन नहुने...
छिटो सहमति खोज्न शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको आग्रह
भदौ १४, काठमाडौं । प्रमुख चार राजनीतिक दल एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशीमोर्चाका शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बिहीवार शितल निवासमा छलफल गरी जति सक्दो चाँडो सहमति खोज्न आग्रह गरेका छन् । संविधानसभा भङ्ग भएको ३ महीनापछि सहमति जुटाउन औपचारिक छलफलमा जुटेका ती दलका शीर्ष नेतासँग राष्ट्र...
‘बेपत्ता आयोगसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध’
भदौ १४, काठमाडौ (अस) । एड्भोकेसी फोरम र बेपत्ताविरुद्ध एशियाली महासङ्घ (आफाद) ले वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको बेपत्ता आयोगसम्बन्धी अध्यादेश पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याउन लागिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पीडित तथा अधिकारकर्मी...
प्रशासनमा सुधारको आशा कम : मुख्य सचिव
भदौ १४, धुर्कोट (गुल्मी) । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले कर्मचारी प्रशासनमा सुधारको अनिवार्यता भए पनि देशको राजनीतिक अन्योलले गर्दा सुधार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । गृह जिल्ला गुल्मी आएका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव पौड्यालले नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम...
‘भट्टराई सरकार इतिहास मै भ्रष्ट’
भदौ १४, भैरहवा (अस) । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट भएको आरोप लगाएका छन् । पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिन बिहीवार लुम्बिनी आइपुगेका यादवले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले भट्टराई सरकारले कुनै पनि राम्रा क...
समाधान खोज्ने जिम्मा तीन दलका तीन नेतामा
भदौ १३, काठमाडौं । राजनीतिक सङ्कटको निकास निकाल्न तीन ठूला राजनीतिक दलका बीचमा भएको बैठकले समाधानको उपाय खोज्ने जिम्मा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई सुम्पेको छ । बुधवार सेनासमायोजन विशेष समितिको सचिवालय बानेश्वरमा भएको एमाओवादी, नेपाली...
संविधानसभा विघटनबारे एमालेले श्वेतपत्र ल्याउने
भदौ १३, काठमाडौं । एमालेले संविधानसभा विघटनका कमीकमजोरीको समीक्षासहित श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानसभा विघटनको सम्बन्धमा सर्वसाधारण र पार्टी कार्यकर्तालाई पनि बुझाउन कठिनाइ महसूस भएपछि एमालेले यस्तो कसरत गरेको हो । सो पत्रमा पार्टीका तर्फबाट भएका कमीकमजोरी र अन्य पक्षको भूमिकालाई समे...